Nosalorana ny mari-boninahitra Commandeur de l’Ordre national ny Lehiben’ny Faritra Boeny | Région Boeny
Nosalorana ny mari-boninahitra Commandeur de l’Ordre national ny Lehiben’ny Faritra Boeny
28 juin 2016 A La Une, Actualité
Sahala amin’ny Malagasy rehetra dia nankalaza ny faha-56 taona niverenan’ny fahaleovantena ny 26 jiona 2016 ny mponin’I Mahajanga.
Notanterahina an-tsakany sy an-davany avokoa araka izany ireo fombafomba entina mankalaza izany fetim-pirenenena izany nanoloana ny Lapan’ny tanàna, toerana mahazatra fanaovana ny lanonana.
Fanomezana mari-boninahitra Grand-Croix de 2e Classe, ny Grand Officier, ny Commandeur de l’Ordre national, ny Chevalier de l’Ordre national, ny Ordre de Mérite ary ny Médaille de Travail ho an’ireo olona nahavita be ho an’ny firenana kosa no nanokafana izany. Anisany tamin’izy ireo ny Lehiben’ny Faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar izay nosalorana ny mari-boninahitra Commandeur de l’Ordre National. Nofaranana tamin’ny matso lehibe nandraisan’ny tafika sy ny polisy, ny mpianatra sy ireo fikambanana isan-karazany eto Mahajanga anjara avy eo ny lanonana ny tapany maraina.
Nofon-kena mitam-pihavanana nanasana ireo olo-manan-kaja tao amin’ny Complexe sportif vaovao, ao Ampisikina Mahajanga kosa no nanohizana ny fankalazana ny hariva, izay nialohavana kabary nifandimbiasana. Hafatra ny hampifankatia ny Malagasy tsy vaky volo araka izany no nasongadin’Atoa Lehiben’ny Faritra Boeny nandritra ny lahateny fohy nataony “Enga anie mba hitondra fifankatiavana bebe kokoa amin-tsika samy Malagasy izao fankalazana izao ary indrindra indrindra hametraka fandriampahalemana eto amin’ny tany sy ny firenena.”Fandriampahalemana izay sarobidy indrindra ho an’ny valala be mandry.
Nampiavaka kely tamin’ny isan-taona kosa, nialoha ny matso, ny fisian’ny fiara-manidina nandraraka arendrina ho an’ny ankizy izay vory lanona nanoloana ny Lapan’ny tanàna.
Nampiavaka ankoatra izay ihany koa nefa ny fahataran’ny fanapoahana ny afomanga taty Mahajanga ny omalin’io, izany hoe ny sabotsy 25 jona alina, izay efa ho adin’iray be izao, taorian’ny ora voatondro ofisialy hanapoahana miaraka ny manerana ny Nosy. Izay niteraka fahasorenana sy fimonomononana teo amin’ireo vahoaka marobe efa jihatry ny hatsiaka sy mbola hody lavitra.